Amathiphu ngePhasika kubashayeli bezimoto
KUBALULEKILE ukuhlela uhambo lwakho ngokuthi uyibuke indlela ozohamba ngayo ubheke nezindawo okuba nezingozi kuzona
INTATHELI YEZEZIMOTO | March 29, 2019
AMAHOLIDI ePhasika aseseMome, lokhu okusho ukuthi imindeni eminingi izogcwala imigwaqo ihambela izindawo ezahlukene.
Umphathi weMasterDrive, u-Eugene Herbert, ukhiphe amathiphu azosiza abashayeli ngalesi sikhathi.
Uthe ukufika lapho uya khona kuwumsebenzi. Uthe okokuqala ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi imoto yakho isesimeni esikahle.
“Ngaphambi kokuthatha uhambo olude, qinisekisa ukuthi imoto yakho isevisiwe, ama-wiper ewindscreen awagugile, amasondo awagugile futhi afuthwe kahle. Izingozi ngenxa yezimoto ezinganakekeliwe kahle yinto eyejwayelekile.”
Uphinde wathi okunye ukuhlela indlela ozohamba kuyo ngaphambi kokuhamba.
“Lokhu kuhlanganisa ukuqaphela izindawo lapho kujwayele ukuba nezingozi khona futhi uhlele nokuthi uzoma kuphi. Uma usunayo indlela kumele ungagudluki kuyo.”
UKUKHATHALA ushayela kungenye yezinto ezingadala izingozi emgwaqweni
Uthe futhi kumele ube mehlo-mane, uqaphele ukuthi abanye abashayeli benzani.
“Bhekisisa abanye abashayeli abaseduze kwakho futhi uqaphele nabashayela budedengu abangase babeke impilo yabanye engcupheni. Uma ubona ukuthi omunye umshayeli angase abe budedengu ngaphambi kokuthi enze, kukunikeza isikhathi sokumgwema ngaphambi kokuthi ukushayela kwakhe kube nobungozi.
Uqhube wathi lokhu kuhlanganisa ukubheka emaceleni komgwaqo abahamba ngezinyawo nezilwane ezingase zifune ukuwela kungazelele. Uthe minyaka yonke abantu abahamba ngeziyawo bafa kakhulu.
“Uma usondela emadolobheni noma ubona izimpawu zomgwaqo ezikuqaphelisa ngabahamba ngezinyawo, qaphela bese ushintsha indlela oshayela ngayo ngendlela.”
UHerbert uthe ucwaningo lwakamuva luveza ukuthi ukukhathala kungenye yezinto eziyingozi kubashayeli njengokushayela bephuzile.
“Qinisekisa ukuthi ulale kahle ebusuku bangaphambi kokuhamba. Uma ungalalanga ngayizolo kungcono ukuthola amahora ambalwa okulala bese ufika ngemuva kwesikhathi lapho uya khona. Uma uzela ushayela, hlaba ikhefu ulinde kuze kuba uzizwa uwumqemane bese uyahamba futhi. Yize abanye bencamela ukuhamba ebusuku, kungaphepha ukulinda ukuze kukhanye.”
Uthe ngaphandle kobunzima okubenzayo ngokukhathala nokungabonakali kahle indlela, ebusuku yilapho futhi ungase uthole khona abashayeli abazama ukubalekela amaphoyisa
“Laba ngabashayeli ongafuni ukusebenzisa umgwaqo nabo.”
Uthe kumele wenze isiqiniseko sokuthi uwaphuze kahle amanzi. Uthe kumele uthathe isikhathi upakishe ukudla okunempilo kokubamba umoya namanzi.
“Lokhu kuzokusiza ukuthi ugxile emgwaqweni futhi ugweme ukuphelelwa ngamandla okuhambisa nokudla ukudla okungenampilo neziphuzo ezinoshukela.”
Uthe ngemuva kohambo ungakhohlwa wukwenza konke lokhu okungaphezulu futhi.
“Uhambo oluya ekhaya nalo futhi ludinga ukuhlelelwa. Gwema ukuzama ukujaha uma uya ekhaya wenze ubungozi obungenasidingo.”